Barcelona oo marki 13-aad ku guulaysatay Spanish Super Cup
Friday, April 19th, 2019 - 13:45:33
Monday August 13, 2018 - 09:59:39 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxda Barcelona ayaa marki 13-aad taariikhda kuguulaysatay koobka Super ee dalka Spain taasoo kadhigan in ay kooxda ugu hanashada badan koobkan.
Pablo Sarabia ayaa Seville hogaanka ciuyaarta u dhiibabay kadibh markii ay aaladaVideo Garsoorka caawiya ay gool ka dhuigtay kubad Off-side lagu sheegay.
Gerard Pique ayaa Barcelona u barbareeyay waxaana goolka guusha u saxiixayOusmane Dembele oo caawin kahelay Messi.
Sevilla aya heshayfursad ay kusoo barbarayn kartaybasle Goolhayaha Marc-Andre ter Stegen ayaa daqiiqadi u dambaysay ciyarta kooxdiisa ka badbaadiyay rigooro lagu helay taasoo Barcelonba u suurto gelisay in ay hantaan Super Cup-ka dalka Spain ciyaarta ka dhacdday Tangier, Morocco.
Marc-Andre ter Stegen ayaa qaladkiisa saxay maadam uu isaga sabab u ahaa rigoorada kadib markii uu qalad ku galay Aleix Vidal basle waxuu qabtay rigooro daciif ahayd oo uu ku laaday Wissam Ben Yedder.
Barcelona ayaa ka qayb qaadatay 9 kamid ah 10 Super Cup ee u dambeeyay hase yeesheekoobkan waxuu ka dhacay meel ka baxsandalka Spain oo ah dalka Morocco.
Waa marki lixad oo ay Barcelona ku guulaysanayso 9 sano jeer oo ay fiinaalkan kazoo muuqatay 10 sano ee lasoo dhaafay, sidoo kale waxuu noqonaya koobki 3-aad oo ayg sanadkan qaadaan ka gadaal Horyaalka iyo Coppa Del Rey.